Qarax Gaari looga gubay Ciidamada Uganda oo ka dhacay duleedka degmada Buula Mareer.
Xaaf oo saldhigtay Cadaado iyo Kheyre oo dhoollatus Siyaasadeed ka wada Dhuusamareeb.
Guddoomiye Waaxeed lagu dhaawacay degmada Dharkeynleey ee Magaalada Muqdisho.
Warbixin: Al Shabaab oo Weeraro lagu dilay ciidamo katirsan dowladda ka Fuliyay Gobollada Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Hoose.
Dowladda Itoobiya oo ku dhawaaqday in ay dishay Sarkaalkii hoggaaminayay Inqilaabkii Fashilmay
Ku dhowaad 10 Askari Kenyaan ah oo ku dhintay Qarax ka dhacay duleedka deegaanka Buurgaabo Ee Jubbada Hoose.
Thursday January 03, 2019 - 17:34:47 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ciidamada shisheeyaha AMISOM kasoo gaaray weerar lagula beegsaday deegaan katirsan gobolka Sh/Hoose.
Wararka ka imaanaya duleedka degmada Buula Mareer ayaa sheegaya in qarax miino lala helay gaari gaashaaman oo qeyb ka ahaa kolonyo ay la socdeen melleteriga dowladda Uganda oo ku socdaalayay duleedka degmadaasi.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in gaari gaashaaman lagu gubay qaraxa waxaana dhimasho iyo dhaawac noqday ciidamadii gaariiga la socday, qaraxa ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa deegaannada Golweyn iyo Danaaw oo kaabiga ku haya degmada Buula Mareer.
ciidamada shisheeyaha AMISOM ayaa qaraxyo iyo weeraro dhabbagal ah kala kulma ciidamada shisheeyaha AMISOM marka ay ku socdaalayaan waddooyinka gobollada dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya.
Tirada Ciidamada Suudaan ee ku sugan Wadanka Yemen iyo Mushaaraadka ay qaataan oo la ogaaday [Warbixin].
Weeraro Ka Dhacay Shabeellaha Hoose iyo Jubbooyinka.
Shil Khasaara nafeed dhaliyay oo ka dhacay degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho.
Al Shabaab oo 13 Askari ku dishay Weeraro ka dhacay Duleedka Buurhakaba.
Iska hor'imaad Khasaara dhaliyay oo Gaalkacyo ka dhacay iyo Xiisado kajira Dhuusamareeb.
Qarax ay ku dhinteen Ciidamo katirsan DF oo ka dhacay galbeedka Muqdisho.
Gaashaanlle Max'med Xuseen dhaqane Oo Muqdisho lagu dilay iyo Weerar ka dhacay Baraawe.